Uruzọ Guru Jára - WRSP
** Maka usoro iheomume na profaịlụ maka ịgbatị, hụ Na-abanye 2019.
1971 (Jenụwarị 4): Jaroslav (Jára) Dobeš mụrụ na Příbram, Czechoslovakia (nke bụ Czech Republic).
1976: Mgbe ọ dị afọ ise, dị ka o mechara kwuo, Jára hụrụ ọhụụ nke mmụọ na ihe ndị ọzọ karịrị ike.
1980: Jára malitere idekọ ahụmịhe karịrị nke ya na akwụkwọ akụkọ. N’ikwere na ọ na-arịa ọrịa ọgụgụ isi, ndị dọkịta tinyere ya ọgwụ buru ibu.
1982 (Nọvemba): Jára gbalịrị ịkwụgbu onwe ya n’elu osisi mana ezigbo enyi ya zọpụtara ya ma kpọga ya ụlọ ọgwụ. N'ebe ahụ, ọ gafere ihe ọ mechara kọwaa dị ka ahụmịhe ọnwụ, nke mere ka ndụ ya dịrị n'ọnọdụ ime mmụọ.
1985: Jára ghọrọ onye aka ochie n’ịgba ugwu.
1989: Jára gbagara Italytali, ebe ọ gụrụ Roman Katọlik na ọdịnala ndị mọnk, yana Kabbalah na nkuzi ndị ọzọ esoteric.
1991: Jára malitere ịrụ ọrụ dịka ọkachamara na ịrị elu ugwu na onye nkuzi, ma nọrọ oge na hermitages eke. Dị ka ndị na-eso ụzọ ya si kwuo, ọ nwetara ihe ọmụma na Arco, Italy.
1995: Jára malitere inye oru ya dika onye okacha amara nke igwe na onye nwe mmuo. N'otu afọ ahụ, ọ na-ekwu na ya natara mbido kachasị elu, site na mmụọ, n'ime Pyramid nke Menkaure na Giza, Egypt, na ntuziaka ka ọ gaa India, ebe ọ ga-ahụ onye guru ya.
1990s: Jára gara ugboro ugboro na India, ebe ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru Swami Nagananda na Guru Anahdan.
1996: Jaroslav Dobeš, nke a maara ugbu a dị ka Guru Jára, malitere ịkụzi ihe na Czech Republic wee kpọkọta ndị na-eso ụzọ ya mbụ, ndị ọ ga-emesịa guzobe Guru Jára Path.
1997 (Septemba 15–16): Jára haziri emume “Days of Spiritual Activities” na Museum of Natural History nke Olomouc, Czech Republic.
1998: Jára na ndị na-eso ụzọ ya guzobere ụlọ obibi ndị mọnk na Odrlice, Czech Republic.
1999: Jára bipụtara akwụkwọ mbụ ya, Ndị njem ala nsọ ga-anwụ anwụ. A malitere ụlọ ọrụ na Olomouc na Zlín, Czech Republic, na Dharamshala, India. E mepere obere ebe obibi ndị mọnk na Horní Bečva, n'ugwu Beskids, Czech Republic.
1999: Emere nzukọ ọmụmụ ihe mba ụwa mbụ na agwaetiti Mindoro, Philippines.
2000: Jára guzobere Czech Telepathic Association.
2000–2001: Emume buru ibu nke athzọ a haziri n’etiti obodo Czech dị iche iche dọtara uche ndị mmadụ.
2001: Jára bidoro akwụkwọ akụkọ ahụ Akara. A na-erere kaadị Czech oche ya maka ọhaneze Czech ma ghọọ onye na-ere ahịa kachasị mma.
2001: Mwakpo mbụ wakporo Guru Jára Path site na ndị Czech na-emegide òtù nzuzo.
2002 (November 22-24): A haziri Symposium nke Esoteric Science na Olomouc.
2002: Emepere ụlọ ọrụ ọhụrụ na Hampi, Karnataka, India.
2003: Jára kwagara Thailand, mgbe ahụ gaa Nepal, ebe ndị na-eso ụzọ ya na Czech Republic dị ọtụtụ puku. Emepere Prague etiti.
2004: E guzobere Poetrie Esoteric Institute, yana Barbora Plášková dịka onye ntụzi aka.
2005: Mgbasa ọgbaghara na mwakpo ime ihe ike megide Jára na ụmụ akwụkwọ ya mere. E mechiri ebe obibi ndị mọnk na Odrlice.
2007: Seminar ikpeazụ na Czech Republic kuziri ya n’aka Jára. Jára na, mgbe e mesịrị, Plášková hapụrụ Europe kpamkpam na Asia.
2007 (Mee 14): Mgbe emechara nyocha ndị uwe ojii gbasara Jára, etinyere ya na ndị a na-achọ achọ n'ihi na ndị uwe ojii Czech amaghị ebe obibi ya.
2009 (February 18): Ndị ọchịchị nọ na Philippines kwenyere Jára na mba ahụ. Plášková soro na Machị. Ndị ọchịchị Czech tinyere ya na ndepụta a na-achọ achọ na Ọktọba ebe ọ bụ na amaghị ebe obibi ya.
2009: Na enweghị Jára na Plášková, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ekweghị ekwe gbalịrị ịchịkwa mmegharị ahụ. N’ihi ya, e mechiri etlọ Ọrụ Poetrie Esoteric, ndị nọbu na ya nyefere ndị uwe ojii Czech ndepụta nke ụmụ akwụkwọ.
2010 (October 19): Ndị isi nchekwa nke ndị uwe ojii Czech (SROC), na nkwado na ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno, wakporo ogige nke ngagharị na ụlọ nke ndị isi nọ na Czech Republic.
2011: Jára hiwere ashram na agwaetiti Siargao, Philippines.
2011: Jára bipụtara Casanova Sútra, akwụkwọ ọgụgụ na-akụzi ihe gụnyere nkuzi ya ndị bụ́ isi. Ọtụtụ ihe ngosi gosipụtara ihe osise Astrofocus ya na Czech Republic.
2012 (Mee 28): Ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno nyere akwụkwọ ikike njide mba megide Jára na Plášková, maka nrụrụ aka asatọ e boro ebubo mere n'etiti 2004 na 2006.
2014 (October 7): Alaka Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno mara Jára na Plášková ikpe, na-anọghị ya, mkpọrọ afọ iri na afọ iteghete na ọkara.
2015: E jidere Jára na Plášková na Philippines na arịrịọ ndị ọchịchị Czech.
2015-2019: Ikpe ikpe gara n'ihu mgbe Jára na Plášková ka na-ejide, na ụlọ ikpe ọzọ na-aga n'ihu maka ọdịda 2019.
Jaroslav (Jaanta) Dobeš mụrụ na Jenụwarị 4, 1971, na Příbram, Czechoslovakia (Czech Republic ugbu a). Dịka o mechara kọwaa, ọ malitere ịhụ mmụọ na mmụọ ihe ịtụnanya ndị ọzọ dị afọ ise mgbe ọ dị afọ ise. Mgbe ọ dị afọ itoolu, o kpebiri idekọ ahụmịkasị ọhụụ ya na akwụkwọ akụkọ, nke ndị mụrụ ya chọpụtara. Ha kwenyere na ọ na-arịa ụdị ọrịa ụbụrụ ụfọdụ, ndị dọkịta dekwara ọgwụ ndị siri ike, nke nwere mmetụta ọjọọ na-eto eto na Jabi. Na November 1982, ọ nwara ịkwụgbu onwe ya n’elu osisi, mana ezigbo enyi ya zọpụtara ya ma kpọga ya ụlọ ọgwụ. N’ebe ahụ, ọ gabigara ihe ndị o mechara kọwapụta dị ka ahụmahụ ọnwụ-nso, nke duziri ndụ ya gaa n’ihu ime mmụọ.
Mgbe ihe ahụ mechara, ọ gbanahụ na ihe ọ hụrụ dị ka imebi ụlọ na-emegbu onwe ya na ịhụ ihe onwunwe n'anya site na itinye oge ya na ịrị ugwu, nke ọ bịara nwee ezigbo ọkaibe. Na 1989, ọnwa ole na ole tupu ọdịda Ọchịchị Kọmunist na Czechoslovakia, Dobeš gbagara Italytali, ebe ọ gụrụ akwụkwọ okpukpe Roman Katọlik na ọdịnala monastic. Ọ makwaara n'ọtụtụ nkuchi mmụọ, site na Kabbalah ruo Feng Shui, ma zute ndị na-eso ụzọ Julius Evola (1898 – 1974), nke nkuzi ya na Tantra “kpaliri ya mmụọ ukwuu” (Plášková 2019). Ọ nọrọ oge na Rome na ịrị ugwu na eke nnweta sitere na Italytali, gụnyere Porto Venere, n'ụsọ oké osimiri Ligurian, Lumignano, na nso Vicenza, Sperlonga, nke dị n'etiti Rome na Naples, [Image dị n'aka nri] na Arco, na Province nke Trento.
Arco bụ ma ama ebe ime mmụọ dị mkpa, nke nwere ebe ana - akpọ Marian ofufe ma nwee akụkọ mgbe ochie nwere ebe obibi ya, na ebe Jára ga-azụlite agụụ maka ịrị ugwu. Na 1991, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka ọkachamara n'ihe ịrị elu ugwu na onye nkuzi na Italy, Spain, na France .O kwuru na ya zutere na ,tali, na 1992, onye nkuzi mmụọ omimi nke ọ kpọrọ “Cagliostro nke abụọ,” n'okpuru onye ndu ọ nọrọ ọnwa anọ na-amụ “akàrà, akara, na mkpachapụ anya,” ma kọwaara ya ihe odide anwansi nke Renaissance (Guru Jára 2016a; Guru J awo 2018; Plášková 2019; maka akụkọ nke mmegharị ahụ, m tụkwasịrị Manek 2015 na ajụjụ ọnụ Ajụjụ duziri ndị ndụmọdụ na ụmụ akwụkwọ nke athzọ na Prague na June 2019).
Agbanyeghị, ọdịmma ime mmụọ ya, mere ka Jára chọọ amamihe ochie ahụ n'ihe ọ lere anya dị ka ebe ime mmụọ nke ụwa, ọ bụ ezie na ndị na-eso ụzọ mechara kwuo na ya erutela mmụta na 1991 na Arco, n'isi mmiri dị n'obodo San Martino mgbe ọ na-alọta site na ọtụtụ izu nọrọ n'ọgba nke nnukwu ugwu ịrị Massone. Na 1995, na Dune nke Pilat, na French Arcachon Bay, ọ natara mkpughe nyere ya iwu ka ọ gaa Jerusalem, ebe mkpughe ọzọ zigara ya Ijipt. N'ebe ahụ, ọ kọrọ na ọ natara mbido ya dị elu, na 1995, site na mmụọ nke mmụọ, ebe ọ na-anọ abalị n'ime Pyramid nke Menkaure, nke kachasị ntakịrị na pyramidị atọ nke Giza, ịghọta na ọnọdụ ya bụ nke Chineke. N'otu afọ ahụ 1995, ọ malitere inye ọrụ aka ya dị ka onye na-agụ kpakpando ma na-akpọkọta ndị na-eso ụzọ mbụ, ma na-akụzi ụlọ akwụkwọ oge mbụ ya na Fontainebleau, France.
Mgbe ebidochara ya n'Ijipt, ọ natara ọzọ “ntuzi aka n'ụdị onyinyo” na ọ ga-aga India, ebe ọ ga-ahụ guru ya. Ọ gagharịrị Eshia na South America. Na India, ọ nọrọ oge na ashram nke Swami Nagananda (1951 – 2006) na Bukkapatnam, Andhra Pradesh. Ọ rụrụ ọrụ dị egwu na njem njem njem, wee nwee njikọ pụrụ iche na Mahakaleshwar Jyotirlinga na Ujjain, Madhya Pradesh, otu n'ime ụzọ iri na abụọ nke Jyotirlinga na-asọpụrụ ike mkpụrụ nke Shiva.
Nagananda tụrụ aro ka ọ gaa n'ihu n'ọmụmụ ihe Tantric Shivaism, bụ nnukwu mmasị ya, n'okpuru Guru Anahdan (? –2005) na Haridwar, Uttarakhand. Ndi nkatọ a gbagwojuru akụkụ a akụkọ ahụ anya, ndị chere na Anahdan (n'adịghị ka Nagananda, onye ama ama ama na ndị na-eso ya na West) nwere ike ịbụ ihe atụ nke Jára, karịa n'ihi na Jára bịanyere aka na ya ụfọdụ Ederede na aha Anahdan, maka iji nweta ihe nketa ya na nke aghụghọ "ike, karmic ihe mere" (Guru Jára 2016a). Agbanyeghị, ndị mbụ soro na nzukọ Jidda ekwuola na ha abịala India wee zute Anahdan na Arunachala, tupu ọ nwụọ na 2005 (Introvigne 2019).
Jára kwuru na ebidola ya dịka sadhu na India, ma nwee ọfụma (ma mechaa dozie) nsogbu ụfọdụ na Anahdan, bụ onye na-anabataghị nkuzi ya na ndị West na-enweghị atụ na ọdịnala ndị ahịa. Na 1996, mgbe ọ laghachitere Czech Republic, Jára bidoro ịkụziri otu ndị na-eso ụzọ oge niile, bụ ndị mechara guzobe thezọ Guru Jára. Nzukọ ndị mbụ mere n'ụlọ Dr. Mila Plášková, onye a ma ama na-agụ kpakpando, na Zlín, ụmụ ya nwanyị abụọ Barbora na Kristýna ga-emecha rụọ ọrụ dị mkpa na ngagharị nke Jára.
Na Mee 30, 1996, Jára nyere okwu ihu ọha mbụ na Czech Republic, ọ dịkwa na Zlín. Ọ kpọọrọ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ gaa njem njem njem na India, wee nye ụlọ akwụkwọ nke abụọ oge okpomọkụ na Tatranská Lomnica, Slovakia. A na-eme nzukọ mgbede na klọb na ụlọ tii n'akụkụ Czechia, ya na oke ochicho nzukọ ọmụmụ na ememme.
Ememe a kpọrọ “ofbọchị nke Ọrụ Ime Mmụọ,” nke e mere na 15 na 16 Septemba 1997 na Museum of Natural History of Olomouc, dọtara mmasị dị ukwuu ma emesịa lelee ya anya dị ka nzọụkwụ dị mkpa iji guzobe aszọ ahụ dịka nzukọ ime mmụọ guzobere (Manek 2015: 10 – 11). 1997 hụkwara nzukọ ọmụmụ ihe mbụ, na Ugwu Beskids, [Ihe osise dị n'aka nri] ebe a tụlere isiokwu nke mmekọahụ Tantric na ịlọ ụwa ọzọ, wee guzobe ntọala nke omume ime mmụọ.
Otu n'ime ndị na-eso ụzọ mbụ bụ Dr. Eva Bučková, onye bụbu onye ọka ikpe na ngalaba Zlín nke mpaghara Court Brno. O gosipụtara ike telepathic dị ịtụnanya, wee bụrụ onye nkuzi na ezigbo mmekọ nke Jára, tupu ọ tụgharịa ya na nsogbu 2007. Site na 1998, ọmụmụ na nzukọ ọmụmụ ihe egosipụtabeghị nke a ihe ịga nke ọma na, mgbe njem ọhụụ gara nke ọma na India, a gbara ụlọ obibi ndị mọnk n'obodo nta Odrlice, nke dịdebere Olomouc. [Foto dị n'aka nri] Ebe ndị ọzọ pere mpe a na-akpọ kitakus ma ọ bụ tao ki tak (na-egwuri egwu na okwu Japanese maka “ebe nnabata”) na okwu Czech “tak i tak,” nke pụtara “nke ọ bụla”) sochiri, na 1999 na Zlín na Olomouc, Czech Republic, na Dharamshala, India, na obodo nke Horní Bečva na Ugwu Beskids, nkea bụ obere akụkụ nzuzo nke ebe obibi ndị mọnk Odrlice.
Nke a bụ ekwe ekwe Czech Republic of President Václav Havel (1936 – 2011), na nkuzi Jant's Tantric banyere inwe mmekọahụ adịghị ka ihe nleda anya, ma ọ bụ opekata mpụnyere ikike n'obere nnabata. Jára weputara oru nke juputara na mmuta mmuta ozo, nke ozo nke umu akwukwo na ndi okacha amara, tinyere čajodárné putování (tea na-awaghari), bu ndi nleta ma chekwaa otutu ulo Czech tea, nke aburula ebe di nma maka mkparita uka banyere ndoro-ndoro ochichi. omenaala. Ndị mgbasa ozi Czech nyochara ọrụ ahụ nke ọma.
Fọdụ ndị na-eso ụzọ malitere site na mba ndị ọzọ, na Jenụwarị 1999, Jára haziri nzukọ ọmụmụ ihe mbụ mba ụwa n'àgwàetiti Mindoro na Philippines. Njem njem uka gara n'ihu (na 1999, rue Egypt) yana nzukọ ọmụmụ ihe na nkuzi. Ọbụna ụfọdụ mahadum Czech kpọrọ Jára ka ha kwuo okwu banyere Tantrism na ọnọdụ ime mmụọ ọzọ.
Na 1999, Jára bipụtara akwụkwọ mbụ ya, Ndị njem ala nsọ ga-anwụ anwụ, nke Barbora Plášková dezigharịrị, onye pụtaworo n'oge dị ka ezigbo onye na-eso ụzọ ya. Ọtụtụ ndị ọzọ sochiri akwụkwọ a, otu n'ime ihe ndị kacha mkpa Casanova Sútra (2011), akwụkwọ akụkọ gbasara agwagbu tinyere nkuzi Jabbar. Na 2000, mmegharị ahụ weputara websaịtị mbụ ya na 2001, akwụkwọ nke ya, Akara. Nzukọ ọmụmụ ihe na ememme gburugburu Czech Republic chịkọtara ọtụtụ puku ndị na-eso ụzọ. A haziri ha site na 2002 site na ntọala a na-akpọ Little Prince, na mgbe 2004, na obere ọkwa, site na Poetrie Esoteric Institute ọhụrụ guzobere, nke na-arụ ọrụ dị ka mahadum nwere klas na usoro dị iche iche esoteric. N’afọ ọ bụla n’afọ 2000 na 2001, ememme anọ were ụbọchị ole na ole na Zlín, Olomouc, na Prague, na-ebute oke nlebara anya. [Foto dị na aka nri]
Puku afọ iri ọhụrụ amalitela ntọala nke Czech Telepathic Association, nke ewepụtara maka ịmụ ihe ọmụmụ ihe ọmụmụ na Czech Republic. Becametù ahụ ama ama maka mbido telepathy ọ haziri kwa afọ. Theụ tii na-aga na Slovakia. Ejiri CD tinye akwụkwọ ndị gụnyere egwu na ntụgharị uche. Jára guzobekwara Ateliers nke Mkpụrụ Obi (maka ụmụ nwoke) na ndị na - akpọ Ateliers of Soul (maka ụmụ nwanyị), iji kwadebe “ndị ndụmọdụ,” ya bụ, ndị nkuzi nyere ikike izizi ya ọtụtụ ụmụ akwụkwọ.
Ndị Czech na-ahụ maka mmemme ofufe ha esighị ha. Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-agbanwe, ndị Czech na-aghọwanye ndị na-agbasochi anya. Ndi ngbogbo nile na ndi mgbasa ozi dika nke inwe ikikere mmekorita nwoke na nwanyi site na nmekorita nwoke na nwanyi. Agbanyeghị na ndị na-emegide ofufe malitere ichuso mmegharị ahụ na 1999, afọ 2001 akara akara mmalite nke nnukwu mkpọsa megide uruzọ Guru Jára nke gbasaa site na ngagharị nke òtù nzuzo na ụfọdụ mgbasa ozi na ndị uwe ojii, ma mesịa mee ka njide nke Jára na mbelata nke onu ogugu ndi otu a. A tụlere ihe omume ndị a n'okpuru, "N'okwu" Nsogbu. "
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kwupụtara ememme ndị ahụ nke ọma na 2000, dịka nrụgide sitere n'aka òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ebilite, ha gbachiri nkịtị banyere atụmatụ Jabbar na 2001 na karịa. Ihe omume ndị ahụ, agbanyeghị. Na 2002, etinyere otu kaadi Tarot nke okike nke Jára wuru wee bụrụ onye na-ere ahịa. N'otu afọ ahụ, a malitere usoro ememme a akpọrọ Symposium of Esoteric Science na mpaghara Olomouc. Ọzọ kitaku mepere na Hampi, Karnataka, India.
Na 2003, na akụkụ n'ihi ọnọdụ ọhụụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụụ, nke na-adịchaghị mma n'ụlọ na mwakpo nke òtù mgbochi Czech, Jára kwagara Eshia (Thailand, mgbe ahụ Nepal), mana ruo mgbe 2007 ọ ka na-alaghachi Czech Republic oge ụfọdụ na-akụzi ma na-ewebata akwụkwọ ya na foto nka. A kọkwara na Jidda tụgharịrị ntuli aka nke Václav Klaus nke onye isi ala Czech Republic na 2003 dị ka akụkọ mkpagbu maka ọnọdụ ime mmụọ ọzọ na nyocha ụwa. "Ọ gafeela. Anyị agaghị ala n'ụlọ, ”ka o kwuru mgbe ọ nụrụ banyere ntuli aka ahụ mgbe ọ nọ na Malaysia (Manek 2015: 74). Klaus ga-anọgide bụrụ Onye isi ala ruo afọ iri, ruo 2013, ma nweta nrịba ama ụwa maka nkatọ ya banyere European Union, otuto nke usoro iwu mmegide nke Onye isi ala Russia, Vladimir Putin, na mmegide nke Prague Gay Pride.
N'okpuru nrụgide mgbasa ozi, athzọ ahụ kpebiri ịkagbu ememme ndị buru ibu na ilekwasị anya na nkwadebe ndị ndụmọdụ, ihe omume dị n'ime ya, na njem ndị njem, ebe Jára na-eduga ndị otu ahụ n'onwe ha ịchọpụta ihe nketa omimi nke France, Spain, na Morocco yana Thailand, Laos, Nepal na Japan. E mepere etiti ọhụrụ, nke mbụ na Prague, na 2003, onye ga-esochi ya na Brno, mana ebe obibi ndị mọnk dị na Odrlice mechiri na 2005 ma ree ya, ma na-eme atụmatụ iwulite etiti mba ọzọ na Czech Republic ka ebigharịrị ya ebighi ebi. .
Ọbụna mgbe 2007 gasịrị, Jára gara n'ihu na-ezi ụmụ akwụkwọ Czech site na Internetntanetị, ọtụtụ wee gaa leta ya na Eshia ma sonye na njem njem ozokwa ndị nna ha ukwu na-eduzi ma na-eduzi. Ka ọ dị ugbu a, na Czech Republic na ebe ndị ọzọ, a nọgidere na-ahazi ihe ngosi nka nke art art, ụfọdụ n'ime ha na 2011 n'ihe gbasara nkwalite akwụkwọ akụkọ ya Casanova Sútra.[Image na nri]
A haziri ụfọdụ nlọghachi azụ nke Esia na Philippines, ebe 2011, Jára na onye ọrụ ibe ya, Barbora Plášková meghere ashram na Siargao nke dịpụrụ adịpụ, akụkụ nke otu agwaetiti Mindanao. Ashram nyere ọtụtụ mmemme nke mmụọ na egwuregwu, wee bụrụ etiti ngagharị ahụ. Ọ gara n'ihu n'ọrụ a ọbụlagodi mgbe 2015 gasịrị, mgbe ejidere Jidda na Plášková na thelọ Ọrụ Njide Mpụga nke Njikọ nke Bagong Diwa, na nso Manila, ebe ha ka dị n'oge ederede a. Nlaghachi azụ ka na-ewere ọnọdụ na Siargao, a na-akuzi Czech Republic n'okpuru nduzi nke ndị ndụmọdụ asaa dị elu. Agbanyeghị, esemokwu ahụ na-aga nyocha ndị uwe ojii na nrụgide mgbasa ozi belatara ọnụ ọgụgụ ndị otu sitere na 4,000 na mbido 2000 na-erughị 500 na 2019.
Isi ihe dị na nkuzi nke Guru Jára bụ Shivaite Tantrism, n'agbanyeghị na akwụkwọ ya tinyekwara aka ederede ndị Ijipt, Tibetan, Christian na Kabbalistic. N'akwụkwọ Jyara, ndị na-agụ akwụkwọ zutere plethora nke akụkọ ifo ndị Kraịst, ụfọdụ lere anya dị ka nke ndị mgbe ochie na ụfọdụ dị ka ndị mmụọ ụka ụka isi, yana ndị isi Tantric dị ka Padmasambhava (narị afọ nke asatọ), Tilopa (988 – 1069), na Tilopa's onye na-eso ụzọ, Naropa (narị afọ nke iri na otu). Offọdụ n'ime ndị edemede ndị kacha nso nso a kpọrọ aha bụ Julius Evola, Aleister Crowley (1875 – 1947), Wilhelm Reich (1897 – 1957), Paul Brunton (1898 – 1981), na Theos Casimir Bernard (1908 – 1947?), American “White Lama "onye nwanne nna ya bụ Pierre Arnold Bernard, onye a kpọrọ" Oom the Omnipotent "(1875 – 1955), onye nchoputa ọkụ nke Tantrik Order of America onye nwere oke ọrụ dị mkpa na iwebata yoga postas ya na West (Laycock 2013). Theos Bernard kwụsịrị na Punjab na 1947, a kọkwara na e gburu n'oge ọgba aghara ahụ jikọtara ya na Mmekọrịta dị n'etiti India na Pakistan. Ahụbeghị ozu ya. Akwụkwọ ọgụgụ Casanova Sútra rụrụ ụka na ikekwe "White Lama" anwụghị na 1947 ma biri na Himalayas na 1990s, ma ọ bụ ikekwe, dị ka a gwara akụkọ ahụ n'ụzọ ịhapụ ụlọ maka obi abụọ.
Ka ọ na-ekwu banyere ọtụtụ ndị ode akwụkwọ na ndị isi, Jára kwenyere na ezi nkuzi mmụọ niile nwere ike ịpụta na otu isi, nke malitere ịgbasa n'ụwa niile n'oge ọchịchị Pharaoh Nyuserre Ini, onye ọchịchị nke isii nke ndị eze Fifth nke Egypt, onye biri na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ na ise TOA. Jára na-atụle etu ụlọ nsọ Sun nke Nyuserre Ini siri tinye hieroglyphs na amụ na-abanye triangle, ịkọwa ihe ga-emecha mara dịka nkuzi Tantric. Site na Nyuserre Ini sitere na usoro nke mbido, 'akwụkwọ edere ikpeazụ' nke onye bụ Pythagoras (569 – 495 TOA).
Crowley bụ ihe dị mkpa maka Jára. O kwenyere na, dịka Crowley kuziri, anyị na-ebi kemgbe 1904 na oge ọhụụ, nke Aeon nke Horus, nakwa na Crowley bụ n'ezie ịlọ ụwa nke Sir Edward Kelley (1555 – 1597 or 1598), onye na - arụkọ ọrụ na magus Britain John Dee (1527 – 1608 ma ọ bụ 1609). Ma Dee na Kelley biri na Bohemia ọtụtụ afọ. Jidda na-ekwu na John Dee hụrụ Nyuserre Ini na enyo nke anwansi, ma nye ya iwu ka o guzobe Njikọ nke asatọ, nnwale mbụ iji nwetaghachi nkuzi mkpụrụ nke gbasasasịrị Eshia, Europe, na America nke achọpụtara ọhụrụ (Guru Jára 2011: 265). Agaghị ahapụ mbọ Dee Dee agwụbeghị, mana Crowley rụchara ya na Cairo na 1904, mgbe ọ natara site na nwunye ya Akwụkwọ nke iwu, Akwụkwọ Nsọ dị nsọ maka ọnwa ọhụrụ. Jidda na-ekwu na "mmụọ nke Crowley" kere òkè na ahụmịhe omimi ya na Egypt na 1995 (Plášková 2019).
Usoro anwansi nke Jára gunyere ozizi ndi yiri Crowley banyere incubi, succubi, na “umu anwansi”, tinyekwara ya na “Abrahadabra” ugboro ugboro iji meputa udiri anwansi. Nke kachasị mkpa maka Pzọ ahụ, bụ mantra “AleluhJahRa,” nke ha na-akpọkwa aha Jakin, ma na-a himụrị ọ asụ dị ka onye nwe mmụọ zuru oke, ma na-ezo aka na chi ndị Ijipt Ra, dịka enwere ike ịtụgharị ya dị ka “beto diri Onye Holy Ra. ”Ebe“ ja ”na Czech pụtara“ m, ”mantra na-echetakwa mmalite nke Chukwu dị n’ime ha, mmadụ niile bụkwa ebe etiti na onye mebere ụwa ya.
Dị ka Jára, ndị nkuzi niile ọ kpọtụrụ aha na-arụ ụka. Ndị nụrụ banyere Jára nke sitere na mgbasa ozi Czech naanị, nwere ike ikwenye ngwa ngwa na nkuzi ya metụtara naanị, ma ọ bụ opekata mpe, na-enwe mmekọahụ. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime nkuzi Path abụghị ihe metụtara mmekọahụ (Introvigne 2019). Ozizi banyere mmekọahụ na mmekọrịta nwoke na nwanyị dọtara ụfọdụ ndị mmadụ n'ụzọ, mana ihe yiri ka ọ bụ ndị nkuzi gbasara mmadụ ịmata onwe ya, Tarots, Feng Shui na ịgụ kpakpando. N’ezie, ịgụ kpakpando nwere ike ịbụ naanị otu ihe kacha mkpa.
A na-akpọ usoro Jgay nke ịgụ kpakpando “Astrofocus,” ma tinye ihe ndị Ijipt na India.
Astgụ kpakpando, dị ka athzọ ahụ si dị, na-eje ozi dị ka usoro nke nkwurịta okwu n'etiti ụmụ mmadụ na Chineke. Ihe omuma nile nke mbara igwe - mmeghari na okirikiri nke mbara ala na kpakpando, na-anọchite anya akụkụ nke ike Chineke. Otu kpakpando nile nke uwa na mgbe emere mmadụ na-abụ usoro oge Chineke maka ndụ mmadụ. Ihe omuma nke ihe omuma a bu ihe eji eme ka mmekorita nke di netiti eluigwe na ala (Guru Jára Samadhi 2018).
A na - egosi Astrofocus dika usoro nwere ike ichota ma bufee ihe omuma banyere ihe ndi ozo dika otutu akwukwo a.
Na mmechi, Artrofocus art putara dika ihe di nkpa nke nkuzi Jára na oha na eze. Jára n’onwe ya wepụtara kọlọji ndị e wuru gburugburu foto ya nke ndị nwanyị (na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke), ma ndị gba ọtọ ma yi uwe, na-ejide ụdị astroro ha n’otu oge “njirimara” ha ma ọ bụ “mkpụrụ obi.” Jára na-ekwu na “kọlọtọ ndị a nwere ike ịgwa mmadụ okwu [ ] na-agwọ ọ bụghị naanị nwanyị ha na-elegharị anya, kamakwa ndị na-eme ihe (na ndụ ha dị oke iche) nwere ụdị mmetụta, ọnọdụ, ihe mgbochi n'ime ma ọ bụ ọnọdụ ndụ ”(Dobeš 2007a: 2). O mepụtala ọtụtụ narị eserese Astrofocus (Dobeš 2007b), na nkuzi nkuzi etu esi ekwuputa onwe ha site na nka nka nke Astrofocus bu otu n’ime ama ama n’ime umu akwukwo. [Foto dị na aka nri]
Ihe ọzọ yiri ya bụ Astrofashion, nke na-akuziri ụmụ akwụkwọ otu esi ahọta uwe kwekọrọ na njirimara nke kpakpando ha. Ndi akwukwo Astrofashion weputara akwukwo nke ya na Nepal na Bali, na akwukwo akwukwo ndi nwanyi ama ama dika Elle chọpụtara echiche ọhụrụ banyere ụmụ nwanyị na-eyi uwe dịka astrology.
Dịka anyị kwuru na mbụ, na 2002, Jára kwere ka resara ọha na eze ahapụta otu kaadị Tarot nke ya, nke e wukwasịrị n'usoro ihe atụ atọ yana gụnyere ntụnyere Tantra, Taoism, na M Ching. Ekelere ha site n’aka ndị na - anakọta maka uru nka, ma n’ime ụzọ, dị ka otu onye gwara m n’ajụjụ ọnụ m si dị, “a na-eji ha eme ihe ọ bụla,” site n’ịgụ usoro ike iji nyochaa ọnọdụ nke ụmụ akwụkwọ ọ bụla (na nke na-abụghị. ụmụ akwụkwọ, ndị na-arịọ maka agụ) na njem karmic site na ọtụtụ reincarnations. N'ụzọ dị ịtụnanya, ụfọdụ n'ime kaadị ndị ahụ na-egosipụta vampires. N'ezie, Jayi lebara elebara ọgwụ psyche anya dị ka ihe iyi egwu, na-akuzi usoro eji eme ka aru ike, si otu a na-azoputa anwansi megide ha. [Foto dị na aka nri]
Isiokwu ọzọ na-adọta ụmụ akwụkwọ gaa Guru Jára Path bụ Feng Shui. Ngbanwe mbu nke nka China ma obu sayensi nke Jára kuziri dika ihe anakpo ARTantra. Ọ na - akụzi na ihe ise dị n'ọdịnala Taoist (mmiri, osisi, ọkụ, ụwa, na ọla) bụ ihe mejupụtara ya na microcosm mmadụ na macrocosm nke ụwa niile. Nkwekorita nke ihe ise a na-eduzi otu esi ahazi ụlọ na ebe ọrụ ya nke ọma mana ọ gafere ya. Ọbụna mmekọrịta, ihunanya na ndị ọzọ, nwere ike ịhazi ya nke ọma ma bie ndụ kwekọrọ site n'itinye ụkpụrụ nke ARTantra.
Tantra Yoga, nke a makwaara dị ka Aurarelax ma na-emecha ihe Jidda kpọrọ Surftantra, bụ akụkụ nke atọ nke nkuzi Czech. Dabere na Indian Tantra na isi mmalite ndị ọzọ, Jára na-akụzi na ike ụwa na-eduzi ike. Ike nke aka, bu uche mmadu. Uche mmadu, okwukwe, mmetuta ya na nkpuru obi na-eduzi uche mmadu.
N'adịghị ka echiche ndị a ma ama, Tantrism bụ usoro dị mgbagwoju anya nke na-adịghị emeso naanị mmekọahụ. Ozizi Jant's Tantric gụnyere ntụgharị uche, ịhụ ụzọ, mmega ahụ, na ọgwụgwọ Tantric. Iji maa atụ, na 2012, Jára kuziri ụmụazụ ya Europe si Philippines usoro “bungee na-atụgharị uche,” ka a ga-eme mgbe ha na-aga njem ugwu nke Switzerland. Ntụgharị uche n’oge bungee jumping kwesịrị ikuziri "Udo nke meditative nke omume nkịtị na ọnọdụ nsogbu" (Manek 2015: 118-19). [Foto dị n'aka nri] Ntụgharị uche nke Bungee bụ akụkụ nke usoro dị iche iche, nke Jára chepụtara iji hazie usoro ntụgharị uche ọdịnala n'ụzọ nke ndị na-eso ụzọ oge ọdịda anyanwụ ga-aghọta,
Ntụgharị uche bụ akụkụ nke 'okporo ụzọ kpọrọ nkụ' na Tantrism, ebe teknụzụ mmekọahụ na ememe bụ akụkụ nke "ụzọ mmiri." Jára bụ onye nwe ụzọ abụọ ahụ, mana ụzọ mgbochi mmiri abụghị naanị maka mmekọahụ. "Tantra, Jára na-akụzi, pụrụ iche na nke ahụ, n'adịghị ka Vedanta ma ọ bụ Buddhism nke na-ewere ụwa na anụ ahụ dị ka echiche efu (maya), Tantra na-ewere ihe ndị a dị ka ngosipụta nke Chi Chi nke Shakti, nke echiche nke Shiva." uzo miri ure, uwa ihe abughi “onye iro a n’enweghi nkiti” kama obu ihe eji eme ihe, puru itinye aka n’inweta nghọta (Guru Jára 2016b [English transl.]: 39).
Fọdụ, mana ikekwe ọ bụghị ọtụtụ ụmụ akwụkwọ egosila na ha esonye n'ụzọ n'inwe ntụkwasị obi na nkuzi ya banyere ịhụnanya na inwe mmekọahụ nwere ike napụta mmekọrịta na-agbada, ma ọ bụ melite ogo ndụ mmekọahụ ha (Introvigne 2019). Dabere na Guru Jára, mmekọahụ Tantric dị iche na mmekọahụ ntụrụndụ: "na mmekọahụ, ịchọrọ ịhụ mmekọahụ karịa, mana na tantra ịchọrọ ịgbanwe mmekọahụ ka ọ bụrụ ìhè nke Chineke" (Guru Jára 2011: 411).
Dabere na Jára kwuru na ọtụtụ nsogbu dị na ngalaba a bụ n'ihi “nko” na “ogwu.” Ọ bụghị Jaman chepụtara echiche ndị a. Ha nwere ọdịnala a na-akwanyere ùgwù na Tantrism na Buddhism nke ịchọ ọdịmma onwe ha na Taoism, ma nọ na nkuzi nke òtù ndị otu ọgbọ ọhụrụ-Tantric. Jára kwuru otu okwu enyere aka na Kūkai (Kōbō-Daishi: 774 – 835), onye mọnk Japan bụ onye guzobere Shingon Buddhism, sị: “visit gaa leta nne nwanyị mbụ gị, ị ga-ahụ ikpuru ọcha na-eri site na ọhia na ijiji na-acha anụnụ anụnụ na-efegharị n’ọnụ ya. . Ihe nkiri a ga-enye gị nnukwu akwa ụta na ihere a na-enweghị ike ịkọwa. ”Nkọwa nke Jidda bụ nke ahụ
N'ọnọdụ ebe a na-amụtaghị ndụ ọhụrụ n'oge mmekọahụ, ihe 'dị ndụ' nke njikọ nke akụkụ abụọ a ga-adịgide na nwanyị ahụ site na omume na-enye ndụ. Naanị ndị nwetarala Samadhi opekata mpe site na ntụgharị uche nwere ike ịhụ ya (Jára 2013).
Pzọ ahụ kwukwara na Taisha Abelar, onye bụbu onye ọrụ Carlos Castaneda (1925 – 1998), onye na-ekwu na ụmụ nwoke na-ahụ n'anya na-ahapụ "akwa ike" ma ọ bụ "larvae" n'ime ahụ ụmụ nwanyị, ka ha dị ọcha site na nkwanye ùgwù maka ịdị ọcha ma ọ dịkarịa ala asaa. afọ (Hlavinka 2019). N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nko (maka ụmụ nwanyị) na ogwu (maka ụmụ nwoke) bụ akara a na-adịghị ahụ anya nke mmekọrịta mmekọahụ mbụ. Akara ndị a dị iche, Pzọ na-adọ aka na ntị megide ịtụle na ịgwọ ha dịka ọ bụrụ na ogwu na nko bụ otu ihe; ha abụghị.
Ọbụlagodi na mgbe mmekọrịta ahụ kwụsịrị, ndị ya na ha di na mbụ, na-amaghị ma ọ bụ n'amaghị ama, ka nwere ike na-akpa ike site na nko na ogwu na, n'ọnọdụ kachasị njọ, na-eme dị ka vampires nke psyche, na-eme ka ike ya gwụ, ma na-emebi mmekọahụ ya ugbu a. ihunanya ndu. N'ọnọdụ ndị a, a chọrọ ememe maka 'mkpụsị ahịhịa' na 'ihicha ogwu.' Ha bụ akụkụ kachasị arụ ụka nke nkuzi nke uruzọ Guru Jára ma a tụlere ya na ngalaba na-esote.
N’adịghị ka n’ụzọ ụzọ Tantric ndị ọzọ ma ọ bụ mmegharị, dịka MISA Romania, a na-akuzi coitus reservatus ma ọ bụ karezza (inwe mmekọahụ na-enweghị ejaculation) mana edeghị ya iwu. Otu njiri mara nke ndị na-ahụ maka ụzọ Guru Jára bụ ọnụnọ nke ọtụtụ ụmụaka. Ntube bu isi nke otutu nkuchi nku. Dabere na ọnọdụ mmekọahụ n'oge a na-enwe mmekọahụ (ka ụmụ akwụkwọ nke mayzọ ahụ wee nwee ike ịchọpụta site na horoscope ha nke ọnọdụ ndị mụrụ ha mụrụ ha, kachasị mma bụ onye nwere nwanyị nọ n'elu) na ihe ndị ọzọ, ike nke Ihe jikọrọ di na nwunye nwere ike ime ka ndi mmadu di ime mmuo (incubi na succubi), ma obu “ndi bi ala nso otu kpakpando,” ndi “ga-eleta gi” ma obu ibi na uwa (Guru Jabi 2011: 410). N'ezie, ọ bụrụ na a tụrụ ime nwa nwoke, ihe inyoghi inyi ma ọ bụ na-emechi ga-alọghachi ụwa nke mbara igwe, ọrụ ha mezuru. Ọ bụrụ na ịtụrụ ime, ihe ndị a na-eme nkò, nke ha na-amalite iwu “ụlọ akwụ,” “ụlọ” ha, nke nwere ike igosipụta onwe ya n’anụ ahụ, na-akpata nsogbu nwanyị ahụ, ma ọ bụ mee ka “ndị mmụọ kpakpando mee ya. ”(Guru J awo 2011: 422 – 41).
Ekwesiri ighota nkuzi a site na Buddhist nke udiri echiche anọ di iche iche, nke Jára na-achoputa ihe banyere ya. Mañjuśrīnāmasaṃgīti, ederede edepụtara na Buddha Shakyamuni n'onwe ya. Mkpụrụ obi nwere ike ịbanye n'ime akpanwa "kpam kpam n'amaghị ama, kpuo ìsì, n'ụzọ anụ ahụ." Ndị a bụ mkpụrụ obi bụbu ndị biri na ndụ anụmanụ na Planet Earth ma ọ bụ ụmụ mmadụ dị ala. N'okwu nke abụọ, mkpụrụ obi na-abanye n'ime akpanwa na-agbanyeghị, ọ bụ ezie na ha kwenyere na ọ bụ “ọgba ma ọ bụ ụdị ndo,” mana icheta ha. Ọkara nke mkpụrụ obi ndị a bụ ndị ọbịa site na ụwa ndị ọzọ. Otu nke ato bu nkpuru obi nke “batara n’ime akpanwa, mata ihe niile n’oge omumu ma na - egosikwa nne ya banyere uwa ha si puta.” Udi nke ano gunyere ndi avata, ndi n’echebara usoro nile nke imirikiti mmadu (Guru Jabi 2011 : 415 – 17).
Oge ịgba alụkwaghịm bụkwa ihe dị mkpa maka onye na-eso ụzọ Tantric. Jára na-akụzi nke ahụ
N'ụzọ dị iche, usoro mmega ahụ siri ike bụ ịkpa anụ ahụ ruo ọnwa anọ, oge nke ụmụ nwoke na-eche oge mgbaze mbụ. Ọ bụrụ na ha na-eme oge niile, n'etiti ụbọchị iri abụọ na asaa na iri atọ na atọ, a ga-amata usoro amị n'ọnwa nke ejuputa ya. … Ọ bụrụ na mgbaze a na - agbakarị…, ọ pụtara na ihe niile dị mma, ọ bụ ezie na ume ya pere mpe, dị ka égbè eluigwe… Nchọpụta kacha njọ bụ ma ọ bụrụ na mgbapụta ahụ eruteghị ruo ụbọchị iri atọ na anọ ma ọ bụ gafere, n'ihi na ọ pụtara na ike chi adịghị ike ma ọ bụ egbochi kundalini ”(Guru Jára 2016b [Bekee ed.]: 39]).
Nnukwu ogwu na ogwu anaghị ekpochapụ nkuzi Jára banyere mmekọahụ, nke nwere njikọ chiri anya na ịgụ kpakpando. Saturn kwekọrọ na “Don Juan ụdị,” na Jupiter na “ụdị Casanova.” Aha nke mbụ bụ aha akwụkwọ Don Juan, dabere na akụkọ mgbe ochie arishocrat Miguel Mañara (1627 – 1679), n'agbanyeghị na njedebe nke opera nke Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) ekwensu kporo Don Juan na hel, ebe n'ezie ndụ Mañara gbanwere n'okpukpe Katọlik siri ike, tinye afọ ole ikpeazụ ya na ọrụ ebere, onye Katọlik na-atụlekwa ya. Ka maka ịkụ aka. Nke abuo na-ezo aka na onye egwuregwu Venetian Giacomo Casanova (1725 – 1798), onye nwekwara mmasị na alchemy ma jiri akụkụ ikpeazụ nke ndụ ya na Czech Republic nke ugbu a. Naanị ikwu okwu, mmekọahụ nke ụdị Don Juan na-abanye na mkpụrụedemede, yana ụdị Casanova na orgas. Womenmụ nwanyị nwekwara ike ịbụ ụdị Casanova ma ọ bụ Don Juan, na ịchọpụta ụdị mmadụ dị oke mkpa maka nyochaa mmekọrịta ya, ndụ mmekọahụ, na mmega Tantric kachasị mma maka nwa akwụkwọ ọ bụla.
Jayi kwenyere na nkuzi Tantric, na agbanyeghị aha ọ bụla, na-adị na nzuzo na Iso Christianityzọ Kraịst, ma gụnye ma ala ọkpọkọ ma nke mmiri. Ọ na-atụ aro na, agbanyeghị na ndị ọkà mmụta Christian na-ekwupụta njikọ dị n'etiti onye nwụrụ n'ihi okwukwe Rom St Valentine (226 – 269) na ịhụnanya maka akụkọ mgbe ochie nwụrụ ọtụtụ narị afọ mgbe ọ nwụrụ, n'eziokwu na saint ahụ kwesiri ka ama ya bụrụ onye dị nsọ n'anya, ebe ọ bụ na ọ kuziri ihe nzuzo na ndi n’eso uzo ya ma uzo ma olulu miri emi, ya na omume ndi yiri nke agha nke Indian nke mbu (Hlavinka 2019).
Ozizi nzuzo nke athzọ ahụ na-emetụtakwa ọnọdụ Chineke nke Jára na Plášková. A na-atụ aro ha dị ka hypoteshị kama ịbụ nkuzi nkịta. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kwenyere na Jára bụ avatar nke Shiva, n'otu ọnọdụ nke Jizọs, onye bụkwa onye ngosipụta nke Shiva. Guru Jára bụ “nke Chukwu” mana ọ bụ akụkụ nke ihe na-echetara onwe gị na Theosophy, nke gụnyere nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ wepụtara onwe ya ịbanye na mba Kọmunist, Czechoslovakia, nke ọ kọwara dị ka otu n'ime mba kachasị hụ ihe onwunwe n'anya n'ụwa, wee ghọta nwayọ ọnọdụ nke Chineke, na-aza oku sitere na ụfọdụ ndị dị elu na-enweghị ike n'ụwa nke mmụọ. A na-ewere Plášková n'otu aka dị ka ngosipụta nke chi nwanyị Hindu dị egwu Durga.
Fridaybọchị Fraịdee ọ bụla, ndị otu nke engagezọ na-atụgharị uche. A họọrọ Fraịde na 2010 n'oge ndị uwe ojii wakporo, ebe mgbede Fraịde bụ oge kachasị nwayọ na mkpọrọ Czech. Ndị otu nwere ike ịga na etiti mana ha nwekwara ike ịtụgharị uche n'ụlọ, na-ejikọ mmụọ na ndị ndụmọdụ na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Fridaybọchị Fraịdee nke mbụ n'ọnwa ọ bụla, prozọ a na-atụgharị uche maka “Star Meditation”, nke a na-eme n'ogwe ahụ mmegharị ahụ. A na-ahazi nzukọ maka emume ụbọchị dabara na ndụ nna ukwu ahụ ma ọ bụ nke nkọwa kpakpando.
Dịka anyị kwuru na mbụ, mantra “AleluJaRa” nwere ọkwá pụrụ iche n'ụzọ, a na-atụ aro ka agụgharị ya kwa ụbọchị. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ mụrụ usoro ọmụmụ anyanwụ Satva (obere yoga na ntụgharị uche, ekpere na-esote ya) na Philippines, ma na-eme ya kwa ụbọchị. A na-eme ememe dị omimi maka ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị lụrụ di na nwunye maka ụbọchị ọnwa zuru ezu, ọnwa ọhụrụ, chi ụbọchị ma ọ bụ mmemme ime mmụọ. Edere usoro omume ndị ọzọ ka ahapụ maka ịlaghachi ogologo oge. A na-atụ aro ka ụfọdụ ụmụ akwụkwọ niile na-eme mmụọ ime mmụọ kwa ụbọchị, mana nke ọ bụla nwere ike ịhọrọ usoro haziri ahazi.
A na-ahazi ememme na ihe omume ọha nke 2000 mbụ na obere, na-abụkarị ugboro abụọ n'afọ, n'ihi mgbasa ozi mgbasa ozi na mbelata ọnụ ọgụgụ ndị otu. Nkezi ndị bịaranụ belatara site na ọtụtụ puku gaa na 150 – 180. Ma, ụmụ akwụkwọ na-agbakọta mgbe niile na Philippines, ebe ihe ka ọtụtụ n'ime ndị Czech na-aga ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ, ọtụtụ ugboro karịa otu ugboro. N'ebe ahụ, ihe omume mkpokọta na ememme ka nwere ike ịhazi.
Agbanyeghị na ọ bụghị Jane duuru n’onwe ya, njem njem njem, ihe dị mkpa na ndụ nke athzọ ahụ, na-aga n’ihu ndị dịka Egypt, Jerusalem, Santiago de Compostela, India, na Nepal. Ihe nkuzi ozo di nkpa n’uzo bu “ije ije nke Mo.” A na - ewere njem ime mmụọ dika izizi nke mmụọ nke Jabta, onye bụ ọkaibe n'ihe ntorobịa ya. Ọ na-ezo aka nrịgoro ugwu ihe atụ nke ugwu iri kachasị elu nke ụwa (ya bụ, chakras iri nke ụwa). “Ighaghari ije nke ime mmụọ” nwere ike izo aka na njem nke mmadụ na ndụ, mana ọ bụkwa aha otu n'ime ọmụmụ mmụta ndị kachasị ewu ewu na-aga n'okporo ụzọ. meghekwara onye ọ bụla, gụnyere ndị na-abụghị ndị otu na ọbụna ndị ekweghị na Chineke. A ga - amata "ije ije nke mmụọ" site na ime njem n'ezie, ọkacha mma na mpaghara ebe ike gburugburu ebe nwere ike ịmekọrịta ike nke nwa akwụkwọ ahụ n'ụzọ pụrụ iche: ugwu nsọ, oke ọhịa, ebe ndị njem ala nsọ. [Foto dị na aka nri]
Iszọ mara, ma na-esekwa okwu maka ozizi ya na mmemme nke nsọ nsọ, ọkachasị 'ịkwanye ugwu' nke ụmụ nwanyị. Kindsdị mmekọ nwoke na nwanyị niile na-ekepụta nko, ihe siri ike na-esite na mmekọrịta ejaculation (lee weebụsaịtị AuraRelax.com 2011, nkọwa zuru oke nke adịghị agba otu nwanyị), mana ọbụghị njikọ niile adịghị mma. Ọ bụghịkwa ụmụ nwanyị niile nwere nko na-emebi ndụ ha. Na heydays ya, thezọ ahụ nwere ụfọdụ ndị otu nwanyị 3,000. Ndị otu ahụ na-eme atụmatụ na ọ bụ naanị ihe dị ka ụmụ nwanyị 300, ma ọ bụ pasent iri, ka a dụrụ ọdụ ma ọ bụ gwara ha ka ha gafee mmemme ahụ na-adịghị mma.
Ememme ahụ na-ebu ụzọ achọ ka a chọpụta nko. Jára kwuru na ya “amụọla banyere 'ịkọ ọrịa' nke steeti vasanas (nko, ogwu), dịka site n'ụdị ahịhịa ndị a tụbara n'ime obi na-emepụta ma ọ bụ mmiri wụsara n'akụkụ afọ, nke a na-akwụsi ike ma 'incandescent' ruo ọtụtụ awa. Mgbe ahụ, ahịhịa na mmiri anaghị egosị nsogbu nke ike mmụọ na anụ ahụ, kamakwa ịgwọ ha ”(Hlavinka 2019, na-ehota okwu si na Jára mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ ọ nyere ebe ejidere na Philippines) Maka ndị doro anya, dị ka ndị nna ochie na ndị isi nke China na Japanese ekwuola ihe dị ka otu puku afọ gara aga, "'nko' dị ka ikpuru na-enwu gbaa, nke na-ewe ike ndụ kachasị mma site n'afọ nwanyị ahụ wee nyefee ya na ndị mmekọ mbụ ya" (Hlavinka 2019) .
N'iwepu ihe omuma di na nwanyi nke Jára, n’ike di nso nkea na abanye na ya, n’enweghi onye omasi ma obu ejuwa site na omumu iku ume nke nwanyi ahu mere. Ndị otu a ajụla ịkọwa nkọwa banyere ememe a bụ naanị ụzọ dị mma iji nwee ike igosi Jaman mmekọrịta ya na ọtụtụ ụmụ nwanyị. Dika otu onye otu a si tinye okwu a: nke mbu, na nkowa ya, onye isi omuma di omimi “odighi ihe ozo nke mmadu n’adabere na ya.. Nke abuo, nna ya ukwu nwere ike itinye onwe ya n'ihe omuma ebe obula banyere ya“ obua n'ezie enweghị ụdị ọchị n'ihi na ike niile dị nke ndị nwunye mbụ ahụ metụtara ka a na-enyefe na Guru na ọ ga - emecha wee mee nhicha ọcha nke ga - adịgide ruo ọtụtụ ụbọchị ”(Hlavinka 2019; lee ma webụsaịtị weebụsaịtị AuraRelax.com 2011). Barbora Plášková na-agakarị ememe banyere ọrụ ya, dịka Tantric dị elu na-ebido, na-etinye ike ya na idebe okirikiri anwansi (Introvigne 2019).
Dabere n'ozizi otu, n'ọnọdụ ụfọdụ, agaghị ewepụ nko niile; “Iri na anọ bụ ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke nko a na-ejikọ ọnụ nwere ike wepu n'otu oge. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nwere ike igbu nna ha ukwu. Karma ya ga - enweta 'kari' ọ ga - enwekwa ihe ọghọm, ma ọ bụ ihe ọzọ ga - eme ya ga - adakwasị ya ”(Guru Jára 2011: 63). Withmụ nwanyị ndị nwere ihe karịrị njọ iri “na-adịghị mma” (ya bụ, onye nwere ihe karịrị iri na anọ ndị mmekọ, ebe onye ọ bụla na-eke otu, naanị n'agbanyeghị ugboro ole di na nwunye ahụ nwere mmekọahụ) kwesịrị ịga otu ugboro karịa otu ugboro. N'ọnọdụ ụfọdụ, Jára kpebiri iwepu naanị nko kacha njọ, na-ahapụ ndị ọzọ (weebụsaịtị AuraRelax.com 2011).
Mụ nwanyị kọwapụtara ahụmịhe na-adịghị mma ha dịka nke na-atọ ụtọ, mana n'echiche nke “mkpali ime mmụọ” kama n'okwu nke mmekọ nwoke na nwanyị. Reportedfọdụ kwuru na mkpali a dịgidere ruo ọtụtụ izu. Requestedfọdụ rịọrọ ka 'a kpachara anya' n'ihi nsogbu na ndụ ha. Ndi ozo choro ime ka ha nwekwuo oganihu nke ime mmuo (Introvigne 2019).
A kwụsịwo ịkwapụ unyi n'okporo ụzọ, ebe ọ bụ naanị Jára nyere ikike ịme ememe ahụ, etinyekwa ya n'ụlọ mkpọrọ na Philippines. Tupu ejide ya, ọ na - eme ihe iji kụziere Tantra dị elu na ndị ndụmọdụ ndị ọzọ, nke nwere ike nyere ha aka ịhapụ ụmụ akwụkwọ ụmụ nwanyị, mana ọzụzụ ahụ siri ike ma sie ike enweghị ike agwụcha n'ihi ihe omume na Philippines. Ndị na-efe ofufe na-akọ na ha nwere olile anya na enwere ike idozi nsogbu ikpe Jasan na ọ nwere ike ịkụziri ụmụ nwoke abụọ ndị ọzọ ndụmọdụ ndị na-adịghị mma na ike ịmalite ịmalite ime ememe ahụ n'onwe ya (Introvigne 2019). Maka ihe ga - eme, ma ọ bụ mgbe ọnwụ Jasan gasịrị, ndị otu nwere ike ịkọ nkọ, ebe nna ha ukwu enyebeghị ihe ngosi doro anya. Thekwụsị mọbụ ihe nwere ike ịbụ nnukwu ihe ga-eweta ya ma ọ bụ na ọ gaghị abụ nnukwu nnukwu nsonazụ n'ihi na ọ bụghị akụkụ dị mkpa nke nkuzi ahụ, ọ bụghịkwa iwu na ọ ga - eme ihe mmụọ. N’ezie, haszọ a dị ndụ ugbua ọtụtụ afọ n’enweghi ụdị emume a na-adịghị emerụ ahụ.
Ọ bụrụ na ụmụ nwanyị nwere nko, ụmụ nwoke nwere ogwu. Dika ekwuru na mbu, ha nwere odidi di iche na nko. Ha adịghị ahụ anya, mana enwere ike ịhụ ya site na ụmụ nwanyị Tantric zuru oke na-amalite. Ogwu dị na ọkwa nke chakra mbụ nke ọdịnala Hindu, ya bụ n'etiti mkpụrụokwu na amụ. Atesmụ nwanyị bidoro nyere ụmụ nwoke aka site na ịchọta ogwu ma 'were aka ha ma ọ bụ ire ha' hichaa ya '.
Ikekwe n'ihi na ụmụ akwụkwọ ụmụ nwoke nọchitere anya naanị pasent iri abụọ na ise nke ndị otu ụzọ, nhichacha ogwu nwere obere esemokwu karịa ịkpachapụ anya, o wepula uche ndị na-emegide okpukpe na ndị uwe ojii.
N’ụbọchị ya, ,zọ ahụ nwere ụmụ akwụkwọ 4,000; ụfọdụ 3,000 n’ime ha bụ ụmụ nwanyị. Dịka anyị kwuru na mbụ, esemokwu gbara ya gburugburu n'ụzọ ahụ belatara ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na nso 450. Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọ na Czech Republic, mana obodo dịkwa na Japan na-arụ ọrụ, yana ndị otu nọ na Australia, Germany, United States, Italy, France, Spain, Bulgaria, na mba ndị ọzọ.
A na-ahụta Guru Jára dị ka isi mmalite na onye ndu ndị ngagharị ahụ. Ọ na-aga n'ihu na-ede akwụkwọ yana na-enye ntụziaka site na mpaghara njide ebe enwere njide na Philippines. Enwere isi ebe abụọ dị na ngagharị, na Czech Republic na Philippines. Na Czechia, enwere ebe ana arụ ọrụ na Prague, Brno, na Ostrava, n'okpuru ọchịchị otu mba nke ndị otu asaa, ndị akpọrọ Lodge nke Ra iri na abụọ Ra, ndị a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-erughị ogo iri abụọ na anọ. ndị otu. Na Philippines, ashram nwere anọ nọn na-adịgide adịgide, yana "ndị mọnk nwa oge" (na ndị nọn) na-esi mba ndị ọzọ abịa nọrọ na Siargao izu ụfọdụ ma ọ bụ ọnwa ole na ole. Ọtụtụ ndị otu Czech na-eleta Siargao otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’afọ. Onyonyo n'aka nri]
Na 2011, n'ihi esemokwu ahụ, e guzobere ụkpụrụ pụrụ iche (nke mechara kagbuo). Maka ụmụ nwanyị Czech (na Bulgarian) na-ekere òkè na njem ime mmụọ ime mmụọ na Eshia (na afọ ahụ, gaa Thailand), na mgbakwunye na ọ gara nkuzi nke wherezọ ebe a kọwara n'ụzọ doro anya ụdị mmeme nke Tantric ahụ, a chọrọ ka “ederede ahụ. ikike nke onye isi oche ha (onye ọ bụla nwere ọfịs nwere ọrụ na ebe ọ [sic], ebe ọ na-emechi ya anya), "na-enye ụmụ nwanyị na-efe ya ume isonye na njem njem ebe ememe Tantric metụtara mmekọahụ" nwere ike ime "(Manek 2015: 109). N'ezie, a gakwuuru ndị okenye Czech. Fọdụ nwere obi ọmịiko, ma anọ ma ọ bụ ise bịanyere aka na nkwupụta maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ụmụ nwanyị; ndị ọzọ mere omume megide ibu iro ma ọ bụ na ha aghọtaghị usoro ahụ.
Otu akụkụ dị mkpa nke ọrụ iszọ ahụ bụ ịkwalite akwụkwọ na ọrụ nka Astrofocus nke Jára. Ọbụna mgbe ndị uwe ojii kwụsịrị mmegide ahụ na ndị isi ya, a na-ebipụta akwụkwọ ọhụrụ mgbe niile ma na-ahazi ihe ngosi, na ụfọdụ usoro mgbasa ozi amapụtara ọdịiche dị n'etiti arụmụka gbara ya gburugburu dị ka onye ndu ime mmụọ na mmezu nka o nwere otuto. Mgbe ndị uwe ojii wakporo mmegharị ahụ na 2010 (lee anya n'okpuru, n'okpuru "Okwu / Ihe ịma aka"), ndị na - efe ofufe nwere ike ịhazi ihe ngosi Astrofocus iteghete na Czech Republic na 2011, otu na Mahadum Mahadum dị na Olomouc na 2012, otu na Stockholm, Sweden, na 2013, na otu onye kwa afọ na Castle of Letovice sitere na 2012 ruo 2015. A haziri ihe ngosi abụọ na Athens, Greece, na 2009 na 2010.
Ntọala nke ihe ngosi ndị a dịkwa mkpa. Na 2010, e gosipụtara foto nke Jára na nzukọ ọmụmụ ihe na Castle nke Litomyšl, ihe mgbochi ole na ole si Portmoneum, ụlọ pụrụ iche nke onye na-ahụ maka ihe osise Josef Portman (1893 – 1968) nke onye na-ese Czech esoteric Josef Váchal (1884 – 1969) nke eji ube di iche iche gosiputa ndi mmuo ojoo, ndi nwe ha, na ihe omuma nke ndi Kraist (Introvigne 2018: 218 – 20). Na 2011, ekpughere kọlọ Astrofocus na Duchcov Castle, ebe Casanova nọrọ afọ iri na atọ ikpeazụ nke ndụ ya n'etiti 1785 na 1798.
Ihe ngosi abuo, na Rock Café na Prague na 2011 na obodo Jablonec nad Nisou na 2013 Ndị nhazi mpaghara kagburu n'ihi mwakpo mgbasa ozi, mana n'ozuzu opekata mpe otu mpaghara ọrụ nka jikeere ime mmemme nka nke Jabbar ọbụlagodi ka ekwesịrị ikpe maka ịkwa iko na Zlín ma ejide ya na Philippines. Onyonyo n'aka nri
Na 2011, athzọ ahụ haziri ihe omumu na agwaetiti Siargao na Philippines. N'ịkọchi ndị isi okpukpe ndị ọzọ nke oge gara aga, Jára kwupụtara echiche ya na "ebe a bụ ebe", yana na ịchọ ebe ime mmụọ nke athzọ nke dị na mpụga Czech Republic akwụsịla. Nweta ala, wee jiri nwayọọ nwayọọ jupụzi ọhịa ọhịa ka ọ banye n’etiti ebe a na-agbazị Rishikesh, maka ọrụ afọ ofufo nke ndị na-efe ya. Laghachi azụ na ọrụ ime mmụọ gafere na “Vivaldi oge” (2012 – Winter 2014), ka ha na-agbaso usoro mmụọ nsọ nke otu ìgwè violin na-eme. Oge Anọ site n'aka onye na-ede Antoniotali Antonio Vivaldi (1678 – 1741), na “oge Sengai” (2014 – 2015), mgbe Jára nyochara ihe dị iche iche nke eserese ahụ. Eluigwe, nke ndị Japan Zen monk na onye okike Sengai Gibon (1750 – 1837).
Mgbe 2015 gasịrị, maka ebumnuche kọwara na paragraf ndị na-esote, ọrụ ndị a na-eme na Siargao gara n'ihu n'enweghị Jára na Plášková. Ndị ndụmọdụ ndị ọzọ eduzila nlọghachi azụ, ndị otu ụzọ si Czech Republic na mba ndị ọzọ anọgidewo na-eleta agwaetiti ahụ mgbe niile.
Dịka anyị kwuru na mbụ, mwakpo mbụ emere megide Guru Jára árazọ nke ndị Czech mgbochi ofufe ụbọchị gara aga na 2001. N'afọ ahụ, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ gbara ụlọ obibi ndị mọnk dị na Ugwu Beskids ọkụ. Achọpụtaghị ndị mere ihe ahụ. Monlọ obibi ndị mọnk ọzọ, nke a na-akpọ B7, ka emepere nwayọ iji dochie ya na 2002; mechara rere ya na 2011 iji kwado owuwu nke ashram na Philippines. [Foto dị n'aka nri]. N’afọ 2004, ndị ọkụ na-enwu gbaa wakporo ụlọ ndị mọnk dị na Odrlice. Ndị na-efe ofufe jisiri ike chekwaa ụlọ ahụ, mana ebibiri ihe onye agbata obi ya. Ime ihe ike nke anụ ahụ nọgidere na-abụ akụkụ nke mgbasa ozi nzuzo. Jára n'onwe ya gbapụrụ ugboro abụọ mwakpo mwakpo onwe ya na 2005, nke o lere anya dị ka nsonaazụ mkpọsa ahụ.
Uzo a putara na aka na tozọ nke ndi uwe ojii na ndi mgbasa ozi mesoro dika mmeko nwoke. E gosiputara ihe ndị dị ka mkpachapụ edo edo dị ka ụzọ dị mfe iji meju agụụ agụụ ihe ọjọọ nke Jabbar. Kedu ihe maka n'ụzọ ahụ bụ emume ncheta ihe nke ndị agamaghị maka ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi jikọtara ọnụ n'ike. Egosipụtara Jayi dị ka onye njehie na onye na-eri anụ, ụmụ nwanyị ndị nọ na ngagharị dị ka ndị na-eme ihe ma ọ bụ "enweghị ngwangwa", ndị ụbụrụ na-agbagharị. Jasan amaara onwe ya na ụfọdụ ememme Tantric na ọdịnala narị afọ ọ hụrụ na India “nwere ike pụta n'ihu mmadụ na-amaghị ihe dịka agụụ mmekọahụ” (Guru Jára 2016a). Ememe ememe nke ya zutere otu ihe ahu.
-Zọ mmegide nke mmụọ emeela ka ndị uwe ojii mee ka ndị uwe ojii mara banyere Gzọ Guru Jára n'oge 2000, mana esemokwu bilitere mgbe Jára na Plášková kwupụtara na ha na-apụ na Europe na 2007. E bidolarịrị nyocha nke Jára dabere na mkpesa nwanyị nwanyị enwetarala mkpesa, agbanyeghị na mkpesa ahụ boro ebubo na ebubo nke Jára na-ezighi ezi na ntozu ya na Tantric na ọ bụghị na-akpachapụ akwụkwọ. Ndị uwe ojii gbara Jaraya na Plášková ajụjụ ọnụ tupu ha ahapụ Europe, mana enweghị ebubo ọ bụla gbara na njedebe nke nyocha mbụ ahụ. Ka o sina dị, ndị uwe ojii tinyere Jide na 2007 na Plášková na listi ha chọrọ na 2009 ebe ha amaghị ebe ebe ha nọ. Ndị uwe ojii mechara (2010) kwuru na Jára na Plášková gbagara mba ọzọ iji gbanahụ njide.
Ndị uwe ojii malitere ịchọpụta na nyocha ajụjụ ọnụ na ụmụ nwanyị niile a kwara na mbụ, na-anwa ịchọpụta ma è nwere ihe akaebe nke mmetọ n'ụzọ mmekọahụ. Maka ihe ọ bụla kpatara ya, ụmụ nwoke ndị nwanyị gwara ka ehichapụrụ ogwu ya bụ na nyocha. Achọpụtara ụfọdụ ụmụ nwanyị 300 dị ka ndị akwụghị ọtọ. Ndị uwe ojii gbara ihe karịrị ọkara n'ime ha ajụjụ ọnụ, ụfọdụ na onye ọzọ na ekwentị. E nwere ikpe asatọ ụmụ nwanyị gbara ajụjụ ọnụ kwuru na mkpịsị ahụ a na-akpachabeghị anya bụ ihe na-adịghị mma. Isii isii n'ime ndị ahụ agbaghị akaebe n'ụlọ ikpe ndị ọzọ. Ndị otu ahụ kwupụtara ebubo ndị uwe ojii banyere nrigbu na mmanye nke esemokwu na ahụmịhe na-adịghị mma nwere ike ịbụ n'ihi ụmụ nwanyị na-anaghị asọpụrụ ọgwụ nke ịdị ọcha n'ime ụbọchị iri anọ mgbe ememe ma ọ bụ nrụgide ndị uwe ojii n'oge ịgba ajụjụ ọnụ (Hlavinca 2019; Introvigne 2019).
Ndị uwe ojii, ụlọ ikpe na ụlọ ọrụ gọọmentị na-eme ihe ruo ọtụtụ afọ. Na October 19, 2010, ndi nchekwa nke ndi uwe ojii Czech (SROC), na mmekorita ya na ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno, wakporo ogige nke mmegharị ahụ na ụlọ nke ndị otu nọ na Czech Republic. Ndi umu nwanyi iri na atọ ka ejidere. Ihe kariri euro 200,000. Na 2015, uruzọ Guru Jára tinyere akwụkwọ maka ndebanye aha dị ka okpukpe na Czech Republic na Ministry of Culture; ekwetaghị ịdebanye aha ahụ na Jenụwarị 26, 2017.
Na Mee 28, 2012, ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno nyere ikike njide mba ụwa megide Jabbar na Plášková, maka ndina n'ike asatọ ahụ kwuru na ha mere n'etiti 2004 na 2006. N’ọnwa Ọktọba 7, 2014, otu ụlọ ikpe ahụ mara Jára na Plášková, na-anọghị ya, n’ụlọ nga nke afọ iri na itoolu na ọkara. Site na nrụgide sitere n'aka ndị ọchịchị Czech, ejide Plášková na Jára na Philippines na May 2015. Ha tinyere akwụkwọ maka mgbapu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-ekwu na a na-akpagbu ha na Czech Republic n'ihi okpukpe ha. Akpọrọ arịrịọ ha na 2015. (Ihe ndị ruuru mmadụ na-enweghị Frontiers 2017; Fautré 2017). Na June 10, 2015, ndị uwe ojii Czech na-emeghị nke ọma ịnyachi Jára laghachi na Prague site na Philippines, ebe ikpe mgbapu ya ka na-eche. [Foto dị na aka nri]
Mgbe ogologo oge gachara, na Jenụwarị 26, 2018, ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno kpebiri na ikpe ụmụ nwanyị asatọ, ma zighachi ma Jára na Plášková na belata ntaramahụhụ mkpọrọ nke afọ asaa na ọkara. Sequlọ ikpe dị elu nke Olomouc kewara ikpe ahụ na nke abụọ, otu n'ime otu nwanyị na nke ọzọ ma ọ bụ asaa nke fọdụrụ. N'okwu ikpe mbụ, a tụrụ Jára na Plášková mkpọrọ ntaramahụhụ afọ ise na ọkara na afọ ise, n'otu n'otu. E zighachiri ikpe ndị ụmụ nwanyị asaa ndị ọzọ na ngalaba Zlín nke Courtlọikpe Mpaghara nke Brno. Na Machị 27, 2019, Courtlọ ikpe Kachị Czech kwupụtara mkpebi ikpe na ahịrịokwu ikpe nke nwanyị na-alụbeghị di. Jára na Plášková ekpela ikpe ahụ na mkpebi ha.
N'agbanyeghị nsogbu iwu dị na ya, nghazi ahụ adabaghị. Membersfọdụ ndị otu 450 na-anọgide, na ọtụtụ ndị na-agaghị eso n'ezoghị ọnụ n'ihe omume nke dozọ ahụ na-eso nkuzi ya site na ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ 20,000 bụ akụkụ nke obodo Internetntanetị na-atụle nkuzi Feng Shui nke Path, n'agbanyeghị na ejighị aha Guru Jára ma ụfọdụ nwere ike ịmaghị banyere njikọ ahụ. Banyere Jára, ọ nọgidere na-ede akwụkwọ siri ike ma gbasaa nkuzi ya ọbụlagodi n'ọnọdụ siri ike. O bipụtala akwụkwọ banyere ndụ ya na ngalaba eji eji, ebe ihe ndị a na-egosi na ọ bụ obere ihe na-arụ ọrụ dị ka ohere maka ntụgharị uche nke mmụọ, na gburugburu ụdị mmadụ (Guru Jabi 2016b).
Foto #1: Guru Jára na Sperlonga, Italy, na 1990s.
Foto #2: Nlaghachi azụ na Ugwu Beskids, 1998.
Foto #3: Ebe obibi ndị mọnk dị na Odrlice.
Foto #4: Ememme nke mmụọ, 2001.
Ihe onyonyo #5: Ewebata akwukwo a Casanova Sútra, 2011.
Onyinyo #6: Ihe omuma atu nke Astrofocus Art.
Onyonyo #7: kaadị Tarot sitere na dekin Jackin.
Foto #8: Bungee na-atụgharị uche na Switzerland, 2012.
Onyonyo #9: “Trezọ ije nke Ime Mmụọ” na Rocamadour, France.
Foto #10: Ebe obibi na ashram na Siargao.
Foto #11: Astrofocus collage nke Guru Jára.
Foto #12: Ebe obibi ndị mọnk alaka B7.
Onyonyo #13: Guru Jára na Ngalaba Njide nke Bagong Diwa, Philippines.
Weebụsaịtị Aurarelax.com. 2011. “Óm nadsamcova životní filosofie v kostce 5. kapitola. ”Enwetara site na http://www.aurarelax.com/wordpress/?p=3934 na 2 August 2019.
Dobeš, Jaroslav. 2009. Trekking Ime mmụọ. Honiara, Solomon Islands: BestCeler.
Dobeš, Jakin. 2007a. “Ngosi 'Ndi Nwanyi Na Ago.'” E bipụtara ya dịka okwu mmeghe na Jára Dobeš, Dejà Vu Vúdú, 1 – 5. Zlín, Czech Republic: BestCeler.
Dobeš, Jakin. 2007b. Dejà Vu Vúdú. Zlín, Czech Republic: BestCeler.
Fautré, Willy. 2017. "Ole mgbe Czech Republic ga-emepe ikpe ọhụrụ megide Jaroslav Dobes na Barbora Plaskova?" Human Rights Without Frontiers, November 8. Nweta site na https://hrwf.eu/when-will-the-czech-republic-open-a-new-trial-against-jaroslav-dobes-and-barbora-plaskova/ na July 14, 2019.
Guru Jára. 2018 Stigmata Karmy. Manila: Paradaịs nke Etz Osisi.
Guru Jára. 2016a. “Athzọ nke Onye Nsọ.” Si na http://www.guru-jara-samadhi.com/the-path-of-a-holy-man-ii/ na July 14, 2019.
Guru Jára. 2016b. Metafyzické mříže. Prague: Bondy-Antonín Boraň. Ntughari Bekee Wayzọ a, Manila: Paradaịs nke Etz Osisi, 2017.
Guru Jára. 2013. “Guru Jára: Don Juan Sútra aneb Recepty na vymotávání se ze sítĕ minulých vztahů. Kapitola: Meditace na vlastní sexuální minulost. ”Enwetara site na http://www.aurarelax.com/wordpress/?p=5844 na August 2, 2019.
Guru Jára. 2011 Casanova Sútra. Czech Republic, Liberec: BestCeler na HLAWA creative sro [Nkebi nke abụọ ed., 2013; ruturu na ederede sitere na mbipụta izizi]. Ntughari bekee nke akụkụ mbụ, Tantric Trekking, Manila: Paradaịs nke Etz Osisi, 2017.
Gzọ Guru Jára. 2017. "Akaebe nke ofzọ nke Ndị Isi Chọọchị Guru Juru - Nzuzo." Kesara.
Guru Jára Samadhi. 2018. "Ozizi nke Guru Jára." Enwetara site na http://www.guru-jara-samadhi.com/teachings-of-guru-jara/ na 21 July 2019.
Hlavinka, Pavel. 2019. “Agụụ Tantric na nkuzi nke mmụọ nke Guru Jára.” Akwụkwọ edepụtara maka nzukọ kwa afọ nke CESNUR (Center for Studies on New Religion), Torino, Italy, Septemba 5 – 7.
Ikike ndi mmadu n’enweghi oke ala. 2017 "Philippines: UN: Ndị ọrụ mmadụ na-enyere mmadụ aka na akpọ oku ka mwepụta nke ụmụ amaala Czech abụọ site na Detlọ Ọrụ Njide Mpụpụ Manila." Mee 9. E si na https://hrwf.eu/philippines-u-n-human-rights-ngos-call-for-the-release-of-two-czech-citizens-from-the-manila-immigration-detention-center/ na July 21, 2019.
Introvigne, Massimo. 2019. "Mmekọahụ, Ime Anwansi na ndị uwe ojii: Saga nke Guru Jára." The Journal of CESNUR 3: 3 — 30. E si na https://cesnur.net/wp-content/uploads/2019/08/tjoc_3_4_1_introvigne.pdf na 23 August 2019.
Introvigne, Massimo. 2019. “Guru onye Real Guru Jara Biko Bilie? Akwụkwọ a gosipụtara na nzukọ kwa afọ nke CESNUR, Torino, Italy.
Introvigne, Massimo. 2018. "Artists na Theosophy na Oge a Czech Republic na Slovakia." Pp. 215 – 23 na Mmekpa ahụ, Akwụkwọ na Omenala Western na Central Europe, nke Nemanja Radulović deziri. Belgrade: Ngalaba Philology, Mahadum Belgrade.
Laycock, Joseph. 2013. "Yoga maka Nwanyị Ọhụrụ na Nwoke Ọhụrụ: Ọrụ nke Pierre Bernard na Blanche DeVries na Creation nke Yoga Oge Ọhụụ." Okpukpe na American Culture: A Journal of Interpretation 23: 101-36.
Manek, Filip, ed. 2015. “Akụkọ ihe mere eme nke ụka na Ozi nke Guru Jára.” Akwụkwọ a na-edebeghị ede.
Plášková, Barbora. 2019. "Guru Jára: Oge dị mkpa Nke mepụtara Ozizi GJ." Akwụkwọ edemede a na-edebeghị ede.
Wright, Stuart A., na Susan J. Palmer. 2015. Zion Storming: Ọchịchị Gọọmenti na Okpukpe. New York: Oxford University Press.